AMISOM: Waan fureynaa wadooyinka Alshabaab xireen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 12 August 2014 12 August 2014
Mareeg.com: Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay inuu dhawaan qaadayo howlgal lagu furayo wadooyinka gala degmooyinkii dhawaan Alshabaab laga saaray ee ururkaasi go’doomiyey.
Ku-xigeenka wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya, ahna ku-simaha madaxa AMISOM, Lydia Wanyoto Mutende ayaa sheegtay inay raalli-gelin ka bixinayso dib u dhaca ku yimid codsigii dowladda Soomaaliya ee ku aaddanaa in AMISOM ay furto waddooyin deegaannada ay go’doomisay Al-shabaab, si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku dhihbaateysan deegaannadaas.
“Waxaan dhawaan billaabi doonnaa howlgallo aan Al-shabaab kaga saarayno deegaannada ay ku harsan yihiin, waddooyinkana waan furi doonnaa, si shacabka loo caawiyo,” ayay tiri Lydia Wanyoto.
Lydia Wanyoto Mutende ayaa sidoo kale sheegtay inay dar-dar-gelinayaan howlgalada lagula wareegayo deegaannada ay gacanta ku hayso Al-shabaab ee Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan weydiisatay AMISOM iney furto wadooyinka Alshabaab xireen ee gobollada dalka, iyadoo arintaas culeys dhaqaale ku keentay shacabka ku nool degmooyinkaas.